Job 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Job sara ihe a gwara ya (1-29)
Job weere mba ndị enyi ya baara ya ka ihe na-enweghị isi (1-6)
Ọ sịrị na a hapụla ya (13-19)
“Onye mgbapụta m dị ndụ” (25)
19 Job wee sị: 2 “Olee mgbe unu ga-akwụsị ịkpasu m* iwe,+Kwụsịkwa ikwu ihe na-agbawa m obi?+ 3 Unu abaarala m mba* ugboro iri ugbu a. Ihere anaghị eme unu na unu na-emesi m ike.+ 4 Ọ bụrụgodị na m mere mmehie,Ọ bụ n’isi m ka mmehie m dị. 5 Ọ bụrụ na unu ana-ebuli onwe unu elu,Na-ekwu na ihere nsogbu m nọ na ya na-ebutere m kwesịrị m, 6 Marazienụ na ọ bụ Chineke duhiere m,O jirikwala ụgbụ o ji achụ nta jide m. 7 M na-eti mkpu n’ihi ahụhụ m na-ata, ma e nweghị onye na-aza m.+ M na-arịọ ka e nyere m aka, ma e nweghị onye na-ekpe ikpe ziri ezi.+ 8 O ji nkume rụchie mgbidi n’ebe m si agafe, enweghịkwa m ike ịgafe. O meekwala ka ọchịchịrị gbachie okporo ụzọ m.+ 9 O meela ka m gharazie inwe ùgwù,Kpupụkwa m okpueze n’isi. 10 O si n’akụkụ niile na-akụrisị m ruo mgbe ọ lara m n’iyi. Ọ na-eme ka m ghara inwe olileanya otú osisi e fopụrụ efopụ na-enweghị olileanya. 11 Ọ na-ewesa m iwe dị ọkụ,Ọ na-ewerekwa m ka onye iro ya.+ 12 Ndị agha ya abịakọtala ka ha lụso m agha,Ha gbakwara ụlọikwuu m gburugburu. 13 Ọ chụpụla ụmụnne m ka ha nọrọ m n’ebe dị anya,Ndị ma m esila n’ebe m nọ pụọ.+ 14 Ezigbo ndị enyi* m ahapụla m,Ndị m ma nke ọma echefuokwala m,+ 15 Ndị bịara n’ụlọ m+ na ndị ohu m nwaanyị weere m ka onye mbịarambịa. Abụ m onye mba ọzọ n’anya ha. 16 M na-akpọ onye na-ejere m ozi òkù, ma ọ naghị aza m. Eji m ọnụ m na-arịọ ya ka o metere m ebere.* 17 Ume m na-ekupụta na-asọzi nwunye m oyi,+M na-esikwa ụmụnne m* ísì ọjọọ. 18 Ụmụaka kpọdịrị m asị. M bilie ọtọ, ha na-amalite iji m eme ihe ọchị. 19 Ezigbo ndị enyi m niile kpọrọ m asị,+Ndị m hụrụ n’anya bụzi ndị iro m.+ 20 Abụzi m ọkpụkpụ ọkpụkpụ.+ Ejisiri m ike gbanahụ ọnwụ.* 21 Ndị enyi m, meerenụ m ebere, meerenụ m ebere,N’ihi na Chineke ebiela m aka.+ 22 Gịnị mere unu ji na-akpagbu m otú Chineke si akpagbu m,+Na-emesi m ike n’akwụsịghị akwụsị?+ 23 Ọ gaara amasị m ma a sị na e dere okwu m ede,Ma a sị na e dere ya n’akwụkwọ. 24 Ọ gaara amasị m ma a sị na e ji mkpịsị ígwè na nkume led*Denye ya n’oké nkume ruo mgbe ebighị ebi. 25 N’ihi na o doro m anya na onye mgbapụta m+ dị ndụ. Ọ ga-emecha bịa guzoro n’elu ụwa.* 26 Mgbe e si otú a mebichaa akpụkpọ ahụ́ mN’oge m ka nọ ndụ, m ga-ahụ Chineke, 27 Bụ́ onye m ga-ahụ,Onye anya m ga-ahụ, ọ bụghị anya onye ọzọ.+ Ma, adaala m mbà n’obi.* 28 N’ihi na unu na-asị, ‘Olee otú anyị si na-akpagbu ya?’+ Ebe ọ bụ na nsogbu m si m n’aka. 29 Tụọnụ egwu mma agha,+N’ihi na mma agha na-ata onye mere mmehie ahụhụ. Unu kwesịrị ịma na e nwere onyeikpe.”+
^ Na Hibru, “mkpụrụ obi m.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “akparịala m.”
^ Ma ọ bụ “Ndị ikwu.”
^ Ma ọ bụ “ka o nweere m ọmịiko.”
^ Na Hibru, “ụmụ afọ m,” ya bụ, ụmụ si n’afọ nne m.
^ Na Hibru, “Eji m akpụkpọ ezé m gbalaga.”
^ Na Hibru, “guzoro n’elu ájá.”
^ Ma ọ bụ “Akụrụ m akwụsịla ịrụ ọrụ n’ime ahụ́ m.”